अमेरिकनलाई पछि पार्दै यि दिदि बैनिले विश्व रेकर्ड राखे, ४१ घण्टा ५ मिनेट नाचेर चकित बनाए ! (भिडियो) – PanchKhal Online
Home/भिडियो/अमेरिकनलाई पछि पार्दै यि दिदि बैनिले विश्व रेकर्ड राखे, ४१ घण्टा ५ मिनेट नाचेर चकित बनाए ! (भिडियो)
अमेरिकनलाई पछि पार्दै यि दिदि बैनिले विश्व रेकर्ड राखे, ४१ घण्टा ५ मिनेट नाचेर चकित बनाए ! (भिडियो)
काठमाडौँ -काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं ६ बस्ने दिदीबहिनी रुबिशा श्रेष्ठ र एलिशा श्रेष्ठले ४० घन्टा युगल नृत्य प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा ४१ घन्टा ५ मिनेट नृत्य गरेर गिनिज बुक अफ वल्ड रेकर्डसका लागी रेकर्ड राख्न सफल भएका छन् ।
दुई दिदि बहिनी रुबिशा र एलिशाले जेठ ११ गते बिहान ९ बजेबाट नृत्य गर्न सुरु गरेका हुन् ।
रुबिशा र एलिशाले लगातार नृत्य गर्ने क्रममा खुट्टामा घाउ भएर ब्यान्डिज लगाउनुका साथै स्टेजमा बरफहरु छरिएको थियो । कार्यक्रम सकिए पश्चात बुवा आमा लगायत सबैको अनुहारमा रुवाबासी सँगै आँखामा खुसीको आसु झरेको थियो ।
सोमबार बिहान समापन कार्यक्रम पुर्व खेलकुद मन्त्रि राजन कुमार केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । यस कार्यक्रममा अतिथीको रुपमा बुवा शन्त प्रसाद श्रेष्ठ, आमा दुर्गा श्रेष्ठ, संयोजक सन्तोष लामा, समाजसेवी सम्भुजन कार्की, टाईम किपर हरिचन्द्र लामा लगायत अन्य रहेका थिए । गोल्डेन आई डान्स सेन्टरले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा गिनिज बुक अफ वल्ड रेकर्डस ईभेन्ट नेपालले ईभेन्ट म्यानेज गरेको थियो ।
उनीहरुले नेपालको नाम विश्वसामु राख्नका लागि यो अभियानमा लागेको बताए । श्रेष्ठ दिदीबहिनीका बुवा सन्त प्रसाद श्रेष्ठले आफनी छोरीहरु सानैदेखि नाच्न सिपालु रहेको विश्वास व्यक्त गरे । श्रेष्ठ दिदीबहिनीमध्ये रुबिसा हाल स्नातक तहमा अध्ययनरत छिन् भने एलिसा कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेकी छिन् । (भिडियो हेर्नुहोस)
अलपत्र ५ बर्षे बालकलाई पहिलोपटक आयो ठुलो सहयोग घरैमा!चल्यो रुवाबासी
पुर्ब श्रीमान छोडेर एउटा अपाङ्गको लागी यति ठुलो त्याग सम्म गर्न सक्ने महान नारीको कथा ! (भिडियो सहित)
कल्पना समेत गरका थिएनौं भन्दै आफ्नै दिदिले रुँदै सुनाईन घटनाको डरलाग्दो कहानी ! (भिडियो)